Dhijitari Rinofambisa uye Sensors Series Vagadziri & Vatengesi - China Dhijitari Transmitter uye Sensors Series Factory
Dhijitari Turbidity Sensor ine otomatiki Kuchenesa
Nheyo yeiyo turbidity sensor yakavakirwa pane yakasanganiswa infrared yekumwa uye akapararira mwenje nzira. Iyo ISO7027 nzira inogona kushandiswa kuenderera uye nekunyatso kuona iyo turbidity kukosha. Sekureva kweIO7027 infrared kaviri-yekuparadzira mwenje tekinoroji haina kukanganiswa ne chromaticity kuona iyo sludge yevasungwa kukosha. Basa rekuzvichenesa rinogona kusarudzwa zvinoenderana nenzvimbo yekushandisa. Yakadzikama data, yakavimbika mashandiro; yakavakirwa-mukati mekuzviongorora-basa kuti uve nechokwadi chechokwadi kuisirwa kuri nyore uye calibration.
CS7800D Pamhepo Turbidity Sensor
CS7920D Pamhepo Inoyerera-kuburikidza neTurbidity Sensor
Kunyudza Pamhepo Type Turbidity Sensor
Nheyo yeiyo sludge yevasungwa sensor inoenderana neyakaunganidzwa infrared yekumwa uye akapararira mwenje nzira. Iyo ISO7027 nzira inogona kushandiswa kuenderera uye nekunyatso kuona iyo sludge kusangana. Sekureva kweIO7027 infrared kaviri-yekuparadzira mwenje tekinoroji haina kukanganiswa ne chromaticity kuona iyo sludge yevasungwa kukosha. Basa rekuzvichenesa rinogona kusarudzwa zvinoenderana nenzvimbo yekushandisa. Yakadzikama data, yakavimbika mashandiro; yakavakirwa-mukati mekuzviongorora-basa kuti uve nechokwadi chechokwadi kuisirwa kuri nyore uye calibration.
Dhijitari Yakasimudzwa Solids (Sludge concentration) Sensor ine otomatiki Kuchenesa
Iwo musimboti weSuspended Solids (Sludge concentration) yakavakirwa pane yakasanganiswa infrared yekumwa uye yakapararira mwenje nzira. Iyo ISO7027 nzira inogona kushandiswa kuenderera uye nekunyatso kuona iyo sludge kusangana. Sekureva kweIO7027 infrared kaviri-yekuparadzira mwenje tekinoroji haina kukanganiswa ne chromaticity kuona iyo sludge yevasungwa kukosha. Basa rekuzvichenesa rinogona kusarudzwa zvinoenderana nenzvimbo yekushandisa. Yakadzikama data, yakavimbika mashandiro; yakavakirwa-mukati mekuzviongorora-basa kuti uve nechokwadi chechokwadi kuisirwa kuri nyore uye calibration.
CS5530D Dhijitari Inosara Chlorine Sensor
Constant voltage musimboti wemagetsi inoshandiswa kuyera zvakasara chlorine kana hypochlorous acid mumvura. Iyo yenguva dzose yekuyera nzira yekuyera ndeyekuchengetedza yakatsiga kugona kune iyo elekitirodhi yekuyera kumagumo, uye akasiyana akayerwa zvinhu zvinoburitsa akasiyana azvino masimba pasi peichi mukana. Inosanganisira maviri eplatinamu maelekodhi uye regedzi electrode kuti iite micro yazvino kuyerwa system. Iyo yakasara chlorine kana hypochlorous acid mune yemvura sampuli inoyerera kuburikidza neyero yekuyera electrode ichapedzwa. Naizvozvo, iyo sampuro yemvura inofanirwa kuchengetwa ichiyerera ichienderera kuburikidza neyekuyera electrode panguva yekuyera.
CS1515D Dhijitari pH Sensor
Yakagadzirirwa kuyerwa kwevhu kuyerwa.
Nyore kubatanidza kune PLC, DCS, maindasitiri ekudzora makomputa, zvakajairika zvinodzora, zvisina mapepa ekurekodha zviridzwa kana kubata mascreen uye mamwe mapato echitatu
CS1543D Dhijitari pH Sensor
Yakagadzirirwa yakasimba asidi, yakasimba base uye chemakemikari maitiro.
CS1728D Dhijitari pH Sensor
Yakagadzirirwa Hydrofluoric acid nharaunda. Zvakanaka hf wevasungwa <1000ppm
Ph Sensor Electrode, Chlorophyll Sensor, Electromagnetic Kuitisa Inzwa, Kufambisa TDS Sensor, Quadrupole Graphite Kuitisa Shungu, Titanium Alloy Kuitisa Shungu,